Ngokuxoxa kulolu hlelo lokusebenza lwezingxoxo, uhileleke ekuthuthukiseni ukuhlakanipha okufakelwayo okuyingxenye yakho. Yibani engafi!
Artificial Intelligence (AI Artificial intelligence IsiZulu AI) kuyinto igatsha wesayensi ekubhekaneni ukudalwa imishini iveza izimpawu ukuziphatha ezihlakaniphile. Incazelo "yokuziphatha okuhlakaniphile" isengxoxweni yokuxoxisana, evame ukusetshenziswa njengezinga elihlakaniphile ngokucabanga komuntu. UJohn McCarthy weza ku-1955 okokuqala.
Ucwaningo lwama-intelligence olusebenzayo luyisipesheli kakhulu futhi olukhethekile, futhi luhlukaniswe ngamasimu amaningana angakwazi ukuxhunyaniswa ngaso sonke isikhathi. Ucwaningo lonke luhlukaniswe nezinkinga ezimbalwa zobuchwepheshe; Amanye amagatsha angaphansi asebenzisana nesisombululo sezinkinga ezithile, ezinye zazo, isibonelo, ukusebenzisa amathuluzi athile noma ukufeza izicelo ezithile. Umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukwakha ukuhlakanipha okusebenzayo kuhlobene eduze nenkinga yokwazi, umbuzo wokubala owenziwe ubuchopho bomuntu uqobo noma umbuzo wokuziphendukela kwamakhono okuqonda. Amafilosofi afanayo wokuhlakanipha okufakelwayo afana nezinkinga ezifanayo.
Iningi lezinkinga ezibhekene ne-integer, okuyi-platinum, i-platinum, i-zpracovávání i-přirozeného jazyka (i-komunikace), i-scholarships i-pohybovat iyinhlangano ephezulu yokusebenza. Ukuthobeka ukulalela ukungabi nalutho kunesidingo sokuthi ungabhekana nalokho okushiwo yi-tomto oboru.
Umsebenzisi we-imeyli engasetshenziswa yi-intanethi ye-intanethi ye-biologistých struktur. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka bese uchofoza ukufaka i-intanethi ngokufaka isicelo se-"neuronům".
Genetické programování striktně vzato než prostředek pro řešení problémů umělé ukuthambekela, ukulandela uhlelo lokusebenza emva kokuhlelwa kabusha, besebenzisa uhlelo olusha lwe-algorithmi olwenziwe ngokulandelana kwe-intanethi.
Uhlelo oyisazi uhlelo lwekhompyutha inomthwalo ukuhlinzeka izeluleko kongoti, isinqumo noma ukuncoma izinhlelo izixazululo eziqondile situaci.Expertní zenzelwe ukuze bakwazi ukusingatha ulwazi okungelona ezinombolo futhi ungaqondakali ukubhekana imisebenzi ezingeke ingaxazululwa ngokuthi indlela endala algorithmic.
Ukufunda komshini kuyindawo engaphansi kokuhlakanipha okusebenzayo, ukubhekana nezimo zokuqapha kanye namasu avumela uhlelo lwekhompiyutha ukuba 'lufunde'. Ngokufunda kumongo onikeziwe, sisho ushintsho olunjalo esimweni sangaphakathi sesistimu njengendlela yokuguquguquka okusebenzayo nakakhulu ekushintsheni imvelo.